Kitaaba maalummaa Paarlaamaa, Seenaa, Dimokraasiifi Dippiloomaasii seenessu
Kitaaba maalummaa Paarlaamaa, Seenaa, Dimokraasiifi Dippiloomaasii seenessu Featured
Itoophiyaan bulchiinsa sirna dimokraatawaa ammaa kana osoo hinargiin baroota dheeraaf mirgi namummaafi dimokraasii lammiilee dhiitamaa sirna bittaa nama nyaataa hedduu dabarsiteetti.
Sirnoota darban keessa qajeelfamaafi labsii mootichi ykn sirni abbaa irree baaseen alatti mormuufi falmii taasisuun dhorkaa ta’ee tureera.
Kana malees labsiin karaa mootichaa ummataaf darbu yoo jiraate dibbee rukuchuun hojiitti akka hiikamu taasifamaa turuusaatiin baroota dheeraaf sagaleen ummataa akka ukkaamfamu ta’eera.
Kun ta’us qabsoon diddaa ummataa hammaachaa dhufuusaatiin fakkeenyummaa Biriteeniin bara mooticha Hayilasillaasee (Onkoloolessa 19 bara 1924) seera paarlaamaatiin akka bultuuf yaaliin jalqabaa taasifame.
Yaaliin taasifame kun maqaaf malee dhiitamuu mirgaa namummaafi mirga dimokraasii hambisuu kan hindandeenye akka ture kan dubbatan barreessaa akkasumas, Itoophiyaatti Ogeessa Inistitiyuutii Qorannoo Tarsiimoofi Hariiroo Alaa, Onno Melaakuu Mulaalami.
Bakka itti olaantummaan saba tokkoo, afaan tokkoofi amantii tokkoo lallabamutti waa’ee dimokraasii dubbachuu mitiitii jechi isaayyuu osoo hinbeekamiin baroota lakkoofsiseera kan jedhan barreessichi, hammaachuu qabsoo diddaa ummataatiin sirnoonni balaafamoon sun dhabamsiifamuusaanii eeru.
Barri itti dibbee rukuchuun labsii dabarsaniif dhiittaan mirgaa darbee si'ana ummatni aara galfachuun bakka bu’aasaa filachuun mirgasaa kabachiifatee dimokraasii reefu biqilu kana dhandhamaafi guddisaa akka jiru dubbatu.
Sirna dimokraasii kana keessattis bakka bu’aan ummataa seerota mana hojichaa bareechee beekee gaaffiin ummataa akka deebihuuf hojjechuu qaba kan jedhan barreessichi, isaanis kanuma cimsuuf mataduree, “Paarlaamaa, Seenaa, Dimokraasiifi Dippiloomaasii” jedhuun kitaaba barreessuusaanii himu.
Sirna eebba kitaabasaanii Guraandhala bara 2009 Galma Muuziyeemii Itoophiyaatti bakka qaamonni mootummaa gara garaa argamanitti raawwatamerratti akka jedhanitti, kitaabichi namoota mana maree keessa hojjetan, paartiilee siyaasaa, ogeessota siyaasaa maraaf akka cuuphataattifayyada.
Mana Marii Bakka Bu'oota Ummataarraa sirnicharratti kan argaman Obbo Tasfaayee Dhaabaa akka jedhanitti, kitaabichi falmii paartiilee siyaasaa gidduutti taasifamu kallattii qabsiisuu keessatti shoora olaanaa qabaata. Miseensota manneen maree sadarkaalee adda addaatti argamaniifis wabiidha.
Kitaabichi ogeessota seeraatiin, barreessitootaan akkasumas mana maree keessaa babahaniin kan deeggarame waan ta'eef namoonni marti waa’ee paarlaamaa, mirgaa, dimokraasiifi dippiloomaasii akka beekaniif ni gargaara jedhu.
Keessumaa namoonni gahumsaafi bilchina siyaasaa isaanii guddifachuun falmii taasisuu fedhan marti kitaaba kana dubbisuu akka qaban kan himan Obbo Tasfaayeen, fuulduratti rakkoolee kanaan dura mudachaa turan maqsuuf kitaabichi wabii ta'uu eeru.
Walumaagalatti mirgaafi dirqama namni tokko Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa keessatti qabu beekuuf, falmii paartiilee siyaasaa keessatti qooda fudhachuuf, filachuuf, mormuuf qajeelfamootaafi seerota barraahan beekuun barbaachisaa waan ta'eef kitaaba maalummaa Paarlaamaa, Seenaa, Dimokraasiifi Dippiloomaasii seenessu kun ammoo ka'umsa waan ta'uuf ittifayyadamuun gamnummaadha.
Torban kana/This_Week 6893
Guyyaa mara/All_Days 1291404